Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa kasoo baxay Kulankiweynaa ee Qaxootiga Ogadeniya London lagu qabtay ” Ogaden to Dadaab in Search of Peace”
Maxaa kasoo baxay Kulankiweynaa ee Qaxootiga Ogadeniya London lagu qabtay ” Ogaden to Dadaab in Search of Peace”
Posted by ONA Admin	/ September 14, 2013
Kulanbalaadhan oo lagu soo shaacbixinayay Xaalada Qaxootiga Ogadeniya oo loogu magac-daray “Ogaden to Dadaab in Search of Peace” Qaxootiga Ogadeniya ee magan galyo doonka ku yimid Dhadhaab. Barnaamijkan oo si heer sare ah loo soo aggaasimay waxaa kasoo qeyb galay Haayadaha Xuquuql Insaanka, siyaasiyiin iyo Jaaliyadaha Ogadeniya ee wadanka UK.
Shirkan oo uu daa dihinayay Mudane Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeynba ka hadlay Agendaha shirka iyo masuuliyiinta ka hadlaya. Mudane Maxamed Sheekh Maxamuud waxa uu ku bilaabay taariikhda Ogadeniya oo si kooban uga waramay. Waxuuna ku soo dhaweeyay Mudane Ducaale oo ka hadlay Jaaliyada Ogadeniya ee London u jeedada ay shirkan u sameysay, Mudane Ducaale ayaa sheegay in u jeedada kulankan uu yahay Fund Raising loo sameynayo Barnaamij ku aadan Qaxootiga Ogadeniya. Mudane Ducaale ayaa sheegay in dhamaan tigidhadi loogu talo galay xafladan in lagaday waxa uuna u mahad celiyay jaaliyada Ogadeniya ee UK sida wanaagsan ee barnaamijkan uga qeyb qaateen. Intaas kadib waxa alaguda galay dulucdii shirka,
Dr Trevor ayaa soo bandhigay Barnaamij Maqal iyo Muuqaal ah oo uu kaga hadlay Haween ree Ogadeniya ah oo ku sugan wadanka South Afrika oo uu la soo yeeshay wareysi sanadkan gudihiisa. Dr Trevor waxa uu si aad u qiiro badna usoo gudbiyay taariikhda haweenkaas ree Ogadeniya iyo dhibaatooyinki ay lasoo kulmeen, Dr Trevor ayaa sheegay in haween badan oo ree Ogadeniya ah, Kuwo kasoo jeeda Qowmiyada Oramada uu wareysiyo iyo warbixino kasoo sameeyay sanadkan. Waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee Ethiopia ka jirta inay ku dhacdo haweenka Ogadeniya iyo Ormada oo loo geysto kufsi, jidh dil, illaa heer dil loo geysto. Dr Trevor waxa uu ugu baaqay jaaliyadaha Ogadniya inay u guntadaan sidi qadiyadaha Qaxootiga Ogadeniya loo gaadhsiin lahaa Caalamka. Waxa uu eed usoo jeediyay dhaqaalaha lasiiyo taliska Ethiopia oo uu sheegay inay dhaawac badan u geysato shacabka Ogadeniya sidi logu talo galayna loo adeegsanin. Video oo dhameys tiran kala soco Ilays TV.
Graham Peebles ayaa isagu ahaa Xubinka ugu muhiimsana ee kulankan ka hadlay waxa uuna soo jeediyay Graham arrimo aan lagu soo koobi karin warbixin qoraal ah. Graham waxa uu si aad u naxdin iyo xanuun badan uga waramay dhibaatada Qaxootiga Ogadeniya soo gaadha. Isaga oo xubin xubin ugawaramay dhibaatada soo gaadhay Afartameeyo qaxootiga Ogadeniya ah oo uu wareysiyo kula soo yeeshay Xeryaha Qaxootiga Ogadeniya.
Waxaa kamid ah gabadh 14 jir ah oo Ciidamada Gumeysiga Ethiopia soo kufsadeen, oo kufsigi ku dhashay gabadh. Gabadhaas da’dayar waxa uu ka waramay dhibaatada soo gaadhay kasokow dhaawaci iyo xanuunki kufsigu soo gaadhsiiyay waxa uu sheegay in wali xanuun kale uu heysto. Gabadhan da’da yar waxaa wali xanuun ka heysta bulshada ay la nooshahay oo takoorid ku sameysay maadama oo la kufsaday islamarkaasna ay dhashay ilmo. xanuunka ay kala kulanto bulshada dhexdeeda ayaa ku ah nabar kale oo ugaba sii daran midkii cadowga Woyanuhu u geysteen. Filimada oo dhameys tiran kala soco Ilays TV
Waxa kale oo kulankan kasoo qeyb galay Siyaasiyiin iyo xubno kasocday Qowmiyadaha Ethiopia Sida Qowmiyada Oromada iyo Qowmiyada Axmaarada.
Waxaa kulankan ka hadlay Selaalem oo ah Siyaasi aad ugu xeel dheer siyaasada Ethiopia. Waxa uu kawaramay Banaanbaxyadii ugu danbeeyay ee ka dhacay Ethiopia, iyo daciifnimada taliska Woynaha oo uu ku sheegay in wadamada Ree galbeedku ay naasnuujiyaan. Selaalam ayaa shacabweynaha Ogadeniya uga tacsiyadeeyay dhibaatada soo gaadha shacabka Ogadeniya isaga oo sheegay inay damiir xumo tahay in aan xus loo sameyn Halgamayaasha ku dhintay halganka lagula jiro Woyanaha.
Naciimo Raabi oo ah gabadh aad u da’yar 11 Sano jirta ayaa halkaas kasoo jeedisay gabay ay ugu magac dartay Hope oo ay kaga hadashay dhibaatada ay dareemayso ee ku aadan qaxootiga Ogadeniya.
Ugu danbeyntii waxaa kulankan su’alo iyo Casho loogu talo galay dhaqaale arruurin lagu sameeyay madashaas.
Kulankan ayaa waxaa kasoo baxay Qodobo dhowr ah
In La xoojiyo sidii Dhibaatooyinka Qaxootiga Ogadeniya la kulmaan loo gaadhsiin lahaa Caalamka
In la helo Dad ka taga wadamada Ree galbeedka oo Xeryaha Qaxootiga samafal kageysta
In tababaro iyo Tabarcuaadba loo sameeyo Qaxootiga Ogadneiya ee kusugan Xeryaha Qaxootiga.
Barnaamijkan ayaa si guul ah kusoo dhamaday waxaana la rajeynaha in meelo badan laga hirgaliyo.